Home Wararka Xasan Cali Kheyre oo noqday murashaxa uu Fahad Yasin u adeegsanayo in...
Xasan Cali Kheyre oo noqday murashaxa uu Fahad Yasin u adeegsanayo in uu burburiyo Midoga Murashaxiinta
Ra’isulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa noqday musharax kaliya ee taageeray nidaamka boobka xildhibaanada uu Galmudug ka wado Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor wuxuuna hambalyo u diray Shantii xubnood ee Golaha Shacabka ee la doortay Maalntii Shalay aheyd.
Dhammaan xubnaha kale ee mucaaradka ayaa ka aamusay oo diiday inay soo dhaweeyaan kuraasta Shalay la doortay ee reer Woqooyiga.
Isweyntiina ugu badan ayaa noqotay sababta uu Kheyre usoo dhaweeyey doorasho ay saaxiibadiis ka amuuseyn.
Midowga musharixiinta dhexdooda laba musharax ayaa gooni ka ah oo ka aragti duwan xubnaha kale sida loo wajahayo diidamada Doorashada. Mid waa Xasan Cali Kheyre midna waa Shariif Sheekh Axmed.
Labadaas Nin waxaa agtaalo ayaa la leeyahay rajo meel kale ka muuqata. Inkastoo ay jiraan warar sheegaya in Sheekh Shariif maalmahaan isbadal ku dhacay oo uu kasoo niyad jabayo habka ay ku socoto doorashada, haddana Xasan Cali Kheyre wuxuu weli u muuqdaa siyaasiga kaliya ee mucaaradka ka tirsan oo ay shaqo fiican u socoto.
Afar arrimood ayaa sal looga dhigay qanaacada doorasho ee ka muuqata musharax madaxweyne Xasan Cali Kheyre.
Soo saarista Xildhibaanada
Marka laga hadlayo musharixiinta mucaaradka, Xasan Cali Kheyre waxaa la sheegay inuu yahay ninka ugu badan ee ka shaqeeya arrimaha soo saarista xildhibaanada
Lacag badan ayaa la sheegay inuu ku bixiyey inuu soo saarto Senatoro iyo xubno golaha Shacabka ah. Walaac badan kama qabo dadka soo baxay oo la fahamsan yahay inuu si weyn ugu dhex jiro
2. xubnaha Reer woqooyiga
Marka laga tago Farmaajo, Xasan Cali Kheyre waa siyaasiga ugu badan oo ay reer Woqooyiga rabaan in aay ka qaataan lacagta, waxaase hubaal ah in aanu heli doonin cododkooda waayo waxay u arkaan Xasan Kheyre nin aan noqon doonin Madaxweyne.
3. Xukuumadiisii hore
Xasan Cali Kheyre xubnaha soo baxay illaa iyo hadda ama kuwa heysta fursadda ugu fiican ee Xildhibaanimo waxay u badan yihiin xubnihii xukuumadiisa. Kooxda Farmaajo walaac badan kama qabto xubnahaas oo ay iyaguba u arkaan inay abaal ku leeyihiin .
Waxaa la sheegay inuu Kheyre aaminsan yahay inuu dadka oo dhan uga dhow yahay xubnahaas oo ay ka dhaxeyso wanaag hore maadaama uu madax usoo ahaan jiray. Xubnaha uu isku haleynayo ayaa qeyb ka ahaa markii xukunka looga tuuray 7 daqiiqo.
Xasan Cali Kheyre waxaa Hantidhowrka guud ee dalka uu ku eedeeyay musuqu ugu weynaa ee soo mara Soomaaliya, waxaana uu dhacay adduun dhan $50 Milyan sida aay MOL u sheegeen saraakiil ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda.
Sababta ugu weyn ee uu u raadinayo in uu isku sharaxa kursiga ugu weyn dalka ayaa ah in uu bal fursad ka raadiyo in uu kaga badbaado isla xisaabtan ku yimaada haddii aay dalka ka dhalato dowlad la xisaabtanta maamulkii hore.